Dhiirrigelinta Mulkiilaha Arizona - Tucson Pima Wadashaqayn lagu joojinayo Hoylaawe
Isbeddel ku samee bulshadaada!
Guryahaaga ayaa kaa caawin kara joojinta hoy la'aanta dadka aadka ugu nugul.
Macaashka Milkiilaha guryaha
Barnaamijka Caawinta Guryaha Arizona ee Arizona
Mashruuca Dhiirrigelinta AZ ee milkiilaha guryaha (ALIP) wuxuu ka caawiyaa Arizona Mulkiilayaasha guryaha inay taageeraan dadaallada gobolka oo dhan si loo helo guryo ammaan ah, oo la awoodi karo shakhsiyaadka iyo qoysaska, laguna soo afjaro hoy la'aanta. ALIP waxay caawisaa Milkiileyaasha iyadoo yareyneysa shaqooyinka banaan iyadoo la siinayo tixraacyo joogto ah oo xaq u leh, la baarey shaqsiyaadka, iyo compensating Iyaga oo loogu talagalay waxyeellooyinka jireed ama shaqooyinka banaan ee la xiriira kireynta shakhsiyaadka iyo qoysaska la soo deristay hoy la’aan.
Beddel ahaan, waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa:
Ogolaado inaad aqbasho gudbinta shaqsiyaadka hoyga laawe ah bixiyeyaasha guryahayaga ah.
Oggolow inaad kaqeybqaadato barnaamijka ALIS marka aad kiraysatid.
Gudbi dukumiinti waqtiga ku saabsan wixii waxyeelo ah ama lumis jago.
Waa maxay sababta ALIP?
Dalka Mareykanka oo dhan, bulshada ayaa si guul leh u yareysay tirada dadka la soo deristay hoy la'aanta. Furaha dadaalkan wuxuu ahaa adeegsiga istiraatiijiyado "Guryeyn Koowaad" oo dhigaya dadka ay la soo daristo hoy la'aantu inay galaan guryaha iyo guryaha sida ugu dhakhsaha badan uguna macquulsan iyadoo la siinayo adeegyo ku saleysan hoy ku filan. Istaraatiijiyaddan waxaa loo muujiyey inay si guul leh uga caawineyso joojinta hoy la'aanta, gaar ahaan shakhsiyaadka qaba caafimaadka maskaxda ee daran, naafonimada jireed, ama arrimaha ku saabsan isticmaalka mukhaadaraadka. In kasta oo ay jiraan barnaamijyo guriyeyn oo lagu daboolayo kaalmada kirada, had iyo jeer way adag tahay in la helo guryo kiro ah oo diyaar u ah inay kireystaan ​​dadka taariikh la'aanta guri la'aanta ah sababo la xiriira cuqdad iyo khataro ay ka mid yihiin:
Waxyeellada iyo dayactirka suurtagalka ah ee ay keeneen kireystayaasha la soo deristey hoy la'aanta sababo la xiriira caafimaadka maskaxda ama arrimaha balwadaha.
Deggeneyaasha oo ka tagaya unugyada ama ka saarista guryaha taasoo keentay kiro lumis iyo qarash ay ku helaan kiraysteyaal cusub
Caqabadaha haysta in lala macaamilo maskaxiyan xanuunsan ama kireysteyaal si xun ula dhaqma.
Khibrad hore oo xun ayaa ka kireysay kireystayaal hore oo hoylaawe ahaa.
ALIP waa Xalka
Barnaamijka 'ALIP' wuxuu siiyaa mulkiileyaasha taageero dheeri ah markii ay kireysanayaan kireystayaasha ay la kulmaan hoy la’aanta kuwaasoo ka qeyb qaadanaya barnaamijyada Kabitaanka Guryaha. Kaqeybgalayaasha Bixiyeyaasha Kaalmada Guriyeynta waxay siin doonaan tixraacyo kireystayaal u qalma oo ay ku jiraan maalgalinta kirada. ALIP waxay bixisaa lacago dheeri ah si loo naaquso khasaaraha dhaqaale ee ka dhalan kara waxyeelada ama heshiisyada aan dhameystirneyn ee la xiriira u adeegsiga shaqsiyaadka iyo qoysaska la soo deristay hoy la’aan.
Guri kireeye ahaan, haddii aad ogolaato inaad aqbasho kiraystayaasha la soo gudbiyey liiska bixiyeyaashayada la xushay, ALIP waxay:
Dabool illaa $ 2,000 magdhowga ama laga jari karo 1BR ama unug ka yar ($ 3,500 oo loogu talagalay 2BR +) wixii ka sareeya deebaajiga kirada.
Bixi ilaa $ 1,000 si loo daboolo kirada bishii lumisay sababtuna tahay guri ka saarid, bixitaan, ama joojinta kale ee dhicis ee waqtiga ijaarka. Bixiye Kireynta Guriyeynta wuxuu ka shaqeyn doonaa in dib loo buuxiyo qeybta bil gudaheed.
Bixi ilaa $ 1,000 in laqabto unug furna inta ay shuraakada Guryuhu cadeyso kiraystaha cusub barnaamijka.
Bixi magdhowga sheegashooyinka la diiwaangeliyay maalmood gudahood 30.
ALIP ayaa u baahan waraaqo yar magdhowyada badankood.
Si aad u bilowdo, kala xiriir Adeegyada Bulshada ee Hay'adaha Samafalka Katooliga ee (928) 583 ‐ 4989 ama soo degso qoraalka hoose.
Buug-yaraha Barnaamijka ee AZ Dhul-gariirka